ရုရှား တက္ကသိုလ်၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်း သေဆုံးသူအရေအတွက် ၈ ဦးအထိရှိလာ - Xinhua News Agency
ရုရှား တက္ကသိုလ်၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်း သေဆုံးသူအရေအတွက် ၈ ဦးအထိရှိလာ
ရုရှား--တရုတ် ဆက်ဆံရေးက “မည်သူ့ကိုမှ ဆန့်ကျင်ရန် မရည်ရွယ်ကြောင်း” ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော
အစ္စရေးနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း စိုက်ပျိုးမြေများတွင် နေရောင်ခြည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး စမ်းသပ်မည့် အစီအစဉ်အား စတင်ဆောင်ရွက်
အမေရိကန်-ရုရှား လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲ သံတမန်ရေးရာ ရလဒ်တစ်စုံတစ်ရာ မရဘဲ ပြီးဆုံး
အီရန်နိုင်ငံက ဆိုလီမန်နီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၅၁ ဦးအား အမည်ပျက်စာရင်းသွင်း
မငြိမ်သက်မှုဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ လုံခြုံရေးမှူးချုပ်(ဟောင်း)ကို နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီး
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ရှိ Red Square တွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားသော ရဲအရာရှိများအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Sputnik/Handout via Xinhua)
မော်စကို၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံရှိ Perm တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးက သေနတ်ဖြင့်ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူ ၈ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကာ အခြားသူများစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် တိုက်ခိုက်သူကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း Sputnik သတင်းအေဂျင်စီက ဖော်ပြထားသည်။
သေဆုံးသူအရေအတွက် အတိအကျအား အတည်ပြုလျက်ရှိကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ Sputnik က သတင်းဖော်ပြထားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစဉ် သေနတ်ပစ်ခတ်သူမှာ ခုခံမှုပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း သိရသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနှင့် သိပ္ပံနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးအား Perm တက္ကသိုလ်သို့ အရေးပေါ်သွားရောက်ရန် ရုရှားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mikhail Mishustin က ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Death toll rises to 8 in shooting incident in Russian university
Source: Xinhua| 2021-09-20 16:47:41|Editor: huaxia
MOSCOW, Sept. 20 (Xinhua) — At least eight people were killed and several others were injured afterastudent shot randomly at the University of Perm in Russia on Monday, and the attacker has been detained, Sputnik news agency reported.
The exact number of victims is being confirmed, Sputnik quotedaspokesperson for the Russian Investigative Committee as saying.
The shooter was wounded by the police when he resisted arrest.
Russian Prime Minister Mikhail Mishustin has instructed the health minister and the minister of science and higher education to urgently fly to Perm. Enditem
Photo : Police officers wearing face masks patrol on Red Square in Moscow, Russia, on April 6, 2020. (Sputnik/Handout via Xinhua)
လာအိုနိုင်ငံ၌ COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် Delta Plus ပျံ့နှံ့လျက်ရှိ
ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံက COVID-19 ကန့်သတ်ချက်အချို့ ဖြေလျှော့ကာ လူအများအပြား ပါဝင်သောအခမ်းအနားပွဲများ ခွင့်ပြု
ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် ကပ်ရောဂါတားဆီးရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို AI ဖြင့် လုပ်ဆောင်